Maxaa hadaba dadka loogu dhiiri galinwaayay inay raad raacaan bilowga bisha Muxaram? – Fatwa Somali
/Fiqh /Fiqh / Soonka / Maxaa hadaba dadka loogu dhiiri galinwaayay inay raad raacaan bilowga bisha Muxaram?
Su’aal: Muslimiin badan ayaa soonta maalinta Caashuura, aadna way ugu dadaalaan soonkeeda, tiiyoo ay sababtu tahay dhiirigalinta iyo tarqiibka soonkeeda ku saabsan ee ay ka maqlaan ducaada. Maxaa hadaba dadka loogu dhiiri galinwaayay inay raad raacaan bilowga bisha Muxaram, si ay Muslimiintu u ogaadaan dhalashada bisha ka dib marka idaacada laga sheego ama lagu baahiyo ilaha warbaahinta?
Jawaab: Soonka maalinta Caashuuraa waa sunne la jecelyahay in la soomo, Nabiga iyo asxaabtiisa ayaa soomay, iyaga ka hor Nabi Muuse ayaa soomay si Allaah caza wajalla loogu shukriyo, waayo waa maalin la badbaadiyay Muuse iyo qoomkiisii, lana halaagay Fircoon iyo qoomkiisii, kolkaasay Muuse iyo Reer banii Israa’iil u soomeen inay Allaah caza wa jal u shukri naqaan. Nabigeenuna wuu soomay si uu Allaah caz wajal ugu shukri naqo iyo inuu ku daydo Nibigii Alle ee Muuse. Ehlu Jaahiligii ayaa iyaguna soomi jiray, Nabiguna ummada ayuu faray inay soomaan, markii Allaah farad yeelay soonka Ramadaan ayuu Nabigu (صلى الله عليه وسلم) yidhi:
((من شاء صامه ومن شاء تركه))
(Qofkii rabaa ha soomo kii rabaana hayska daayo).
Waxa uu Nabigu (صلى الله عليه وسلم) sheegay in soonkeeda Allah ku dhaafayo ooy kafaaro u tahay danbiyadii sanadkii tegey. Waxaana fadli badan in lala soomo maalinta ka horraysa ama maalinta ka dambaysa si Yahuuda loo khilaafo, Nabigaana yidhi:
((صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده)) وفي لفظ ((صوموا يوماً قبله ويوماً بعده))
(Sooma maalinta ka horaysa ama maalinta ka dambaysa) xadiis kale waxa ku yimid: (sooma maalinta ka horaysa iyo maalinta ka dambaysa.)
Haddii qofku soomo maalinta ka horaysa ama maalinta ka dambaysa maalinta Caashuura, amaba uu soomo maalinta ka horaysa iyo maalinta ka dambaysa sidaasina way wanaagsantahay. Taana waxa ku jirta in la khilaafo cadowga Alle ee Yuhuuda. In aad layskugu taxalujiyo garashada habeenka Caashuuraa maaha laazim, waayo soonkeedu waa sunne ee maaha waajib. Kolkaasi maaha in layskugu yeedho garashada bisha, waayo haddii qofka mu’minka ahi gafo oo soomo maalinta ka dambaysa iyo maalinta ka horaysa taasi dhibimayso, wuxuuna helayaa ajar badan. Sidaa awgeed waajib maaha in aad layskugu taxalujiyo garashada bilowga bisha arinkaa awgii, waayo waajib maaha ee waa sunne.